फेसबुकमा के-के हुँदैछ परिवर्तन ? यस्तो छ जुकरबर्गको नयाँ रणनिति – Todays Nepal
फेसबुकमा के-के हुँदैछ परिवर्तन ? यस्तो छ जुकरबर्गको नयाँ रणनिति
नयाँ वर्ष २०१८ मा प्रवेश गर्दा फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले पनि एउटा नयाँ रणनिति बनाएका छन् । उनले फेसबुकका देखिने र विरोधभास हुने तमाम समस्याहरुको समाधान खोज्ने रणनिति बनाउँदै अगाडी बढ्ने बताएका छन् । फेसबुकमा नै पोष्ट गरेको एउटा आलेखमा उनले फेसबुकका नीतिहरु तथा यसका उपकरणहरुको गलत प्रयोग भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वराजा शाह र उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथबीच भेटवार्ता (फोटो फिचर)
श्रीमतीलाई पर-पुरुषसँग आफ्नै बेडमा रङ्गेहात भेटेपछि…